दीपकराज गिरीले फिल्म नबनाउने! पाँच करोड लगानीमा गर्दैछन् यस्तो नयाँ काम – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/दीपकराज गिरीले फिल्म नबनाउने! पाँच करोड लगानीमा गर्दैछन् यस्तो नयाँ काम
काठमाडौं । कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र मध्य एक हो फिल्मी क्षेत्र । अन्य सेवाका कामहरु संचालन भएर सामान्य अवस्थामा फर्कने अवस्थामा पुग्दा फिल्म क्षेत्र भने जस्ताको त्यस्तै छ । मानिसहरुको भिडभाड हुने भएकाले कोरोनाको जोखिम बढाउने भन्दै सरकारले फिल्मी क्षेत्र संचालन गर्ने अनुमति दिएको छैन । त्यसैले केही फिल्म क्षेत्रका ब्यक्तिहरु पनि विकल्प खोज्न थालेका छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
चर्चित फिल्म बनाएका कलाकार दीपकराज गिरी अब फार्म–हाउस खोल्ने तयारीमा जुटेका छन् । उनले फिल्मको स्क्रिप्ट लेख्दालेख्दै छोडेर फार्म–हाउसको काममा जुटेको बताएका छन् ।
काठमाडौंको चन्दागीरिस्थित दहचोकमा रहेको पुख्र्यौली जग्गा रहेको र त्यसमा आफुले पनि थपेर फार्म हाउस संचालन गर्ने उनको योजना छ । त्यसका लागि ५ करोड लगानी लाग्ने उनको अनुमान छ । दहचोकमा रहेको १० रोपनी पुख्र्यौली जमिनमा आफुले पनि थपेर ब्यवसाय सुरु गर्ने उनले बताएका छन् ।
फार्म–हाउसमा पैसा तिरेर बस्ने सुविधादेखि कृषि फार्महरु रहने उनले बताएका छन् । स्थानिय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र आफुले चलचित्र क्षेत्रवाट कमाएको त्यही लगानी गर्ने योजनाका साथ ब्यवसाय सुरु गर्न लागेको दिपकको भनाई छ । सरकारले कृषी क्षेत्रमा सहुलियत समेत दिएका कारण पनि आफुले यस्तो काम गर्न लागेको उनले बताएका छन् ।
कोरोनाको महामारीका कारण हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको भन्दै उनले अब विस्तारै आफ्नो अनुभव र रहर लागेको अन्य पेशामा पनि काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । कोरोनाको जोखिम कायम रहेका कारण अब कम्तिमा एक वर्ष चलचित्र निर्माण समेत नगर्ने दिपकले बताएका छन् ।
न्युरोडको आकाश छातै छाता ! कसरी बन्यो काठमाडौंमा अम्ब्रेला स्ट्रिट ? (तस्वीर)
टिकटक अब उमेर अनुसार मात्र चलाउन पाउने, बन्द हुन थाल्यो भटाभट आइडी
जेठभर निषेधाज्ञामा कडाई, ‘कर तिर्न’ असारमा खुकुलो